Song of Songs 8 NIVUK – Nnwom Mu Dwom 8 AKCB | Biblica
Song of Songs 8 NIVUK – Nnwom Mu Dwom 8 AKCB
Nnwom Mu Dwom 8:1-14
1Sɛ anka woyɛɛ me nuabarima
a wunum me na nufu ano,
na mihuu wo wɔ abɔnten so a,
anka mefew wʼano,
a obiara rentumi mmu me animtiaa.
2Anka medi wʼanim
na mede wo aba me na fi,
ɔno a wakyerɛkyerɛ me.
Anka mɛma wo bobesa a wɔde pɛprɛ afra mu,
me ntunkum mu nsu dɔkɔdɔkɔ no bi.
3Ne nsa benkum da mʼatiko
na ne nsa nifa aka me afam ne bo.
4Yerusalem mmabea, mehyɛ mo sɛ,
morennyan na morenhwanyan ɔdɔ mu
kosi bere a ɛsɛ mu.
5Hena na ofi sare so reba a
otweri ne dɔfo koko mu yi?
Mekanyan wo wɔ aprɛ dua no ase;
ɛhɔ na wo na nyinsɛnee wo,
ɛhɔ na nea ɔkoo awo no woo wo.
6Fa me to wo koma so sɛ nsɔwanode,
sɛ nsɔwanode wɔ wʼabasa so,
efisɛ ɔdɔ ano yɛ den sɛ owu,
ne ninkutwe tim hɔ sɛ ɔda.
Ɛhyehye sɛ ogyatannaa,
sɛ ogyatannaa a ano yɛ den pa ara.
7Nsu dodow rentumi nnum ɔdɔ;
nsubɔnten rentumi nhohoro nkɔ.
Sɛ obi de ne fi ahonya nyinaa bɛsesa ɔdɔ a
anka wɔremmu no ade a ɛsom bo.
8Yɛwɔ nuabea akumaa bi a,
ne nufu mmobɔɔ ɛ.
Dɛn na yɛbɛyɛ ama yɛn nuabea yi
wɔ da a wobebisa no ase?
9Sɛ ɔyɛ ɔfasu a,
yebesi dwetɛ abantenten abɔ ne ho ban.
Sɛ ɔyɛ ɔpon a,
yɛde sida besiw ne pon ano kwan.
na me nufu te sɛ abantenten.
Enti nʼani so no mayɛ sɛ obi a
ɔde nea ɛsɔ ani reba.
11Na Salomo wɔ bobeturo wɔ Baal-Hamon;
ɔde ne bobeturo no maa apaafo.
Na ɛsɛ sɛ wɔn mu biara tua no
12Nanso me bobeturo yi yɛ me de.
Me de, meremfa mma;
Salomo de ne de gye nnwetɛbona apem,
na otua nʼapaafo nnwetɛbona ahannu ma wɔhwɛ ne nnuaba no so.
13Wo a wote turo no mu
ne nnamfonom a wɔka wo ho,
ma mente wo nne.
14Bra ma yɛnkɔ, me dɔfo,
na yɛ wo ho sɛ ɔdabɔ ba
anaasɛ ɔforote ba a
ɔwɔ mmepɔw a nnuhuam ahyɛ so ma so.
AKCB : Nnwom Mu Dwom 8